Dhaawacyadii ugu dambeeyay Qariix Soobbe oo laga soo sagootiyay Turkiga – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADhaawacyadii ugu dambeeyay Qariix Soobbe oo laga soo sagootiyay Turkiga
Dalka Turkiga waxaa xalay laga soo sagootiyay 6dii qof ee ugu dambeysay ee ka mid ahaa dhaawacyada ka dhashay qaraxii Soobbe ka dhacay 14kii October ee Sanadkii hore.
Safaaradda Soomaaliya ee Turkiga,Wasaaradda Caafimaadka ee Turkiga iyo mas’uuliyiin kale ayaa ka qeybgalaya sagootinta loo sameeyay dadkii ugu dambeeyay dhaawacyadii ugu dambeeyay ee la geeyay Turkiga kuwaas oo hadda intooda badan bogsaday.
Dadka la soo celiyay waxaa ku jira kuwa lixaadka waxyeello ka gaartay waxaana ka mid ah qof ku socda Gawaarida ay ku socdaan dadka lixaadkooda dhimayhay.
Dalka Turkiga waxaa guud ahaan la geeyay 35 Qof oo ka mid ahaa dhaawacyadii Soobbe waxaana la socday 34 Qof oo ehelkooda ahaa,guud ahaanna waxaa dib loogu soo celiyay Magaalada Muqdisho.
Xildh.Dhalxa oo ku baaqay in Dowladda hubeyso Odayaasha soo xulay Ergada
45,069 total views, 2,019 views today
45,069 total views, 2,019 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
45,140 total views, 2,018 views today
45,140 total views, 2,018 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
45,153 total views, 2,017 views today
45,153 total views, 2,017 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
45,175 total views, 2,017 views today
45,175 total views, 2,017 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,211 total views, 2,020 views today
45,211 total views, 2,020 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]